Facebook ရဲ့ နောက်လာမယ့် Update လေးကတကယ်ဖြစ်လာမလား? -
အခု Facebook က Update အသစ်လုပ်မဲ့ဟာလေးကတော့ Facebook Page တွေဟာ Facebook Group တွေထဲကိုဝင်လို့ရမယ့် Update လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ စီးပွားရေး အတွက်ပိုမိုအားထုတ်လာတယ်လို့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ Social Media Marketers တွေအတွက်လည်းပိုမို အကျိုးရှိလာစေမဲ့ Update ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Facebook Page တွေဟာ Facebook Group တွေထဲကို ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Business Account တစ်ခုအနေနဲ့ Like, Comment, Share တွေကို ပြုလုပ်နိုင်
ဥပမာ – Online Shopping လုပ်ကိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Business Page တစ်ခုပဲရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့ Page မှာ Ads Run ပြီး မိမိရဲ့ Product ကိုကြော်ငြာနိုင်သလို၊ Group တွေမှာလည်း Personal Account နဲ့ ဝင်ရောက်ကြော်ငြာလို့လည်းရခဲ့ပါတယ်။ အခု Update သာအမှန်တကယ်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Business Account တစ်ခုအနေ Group တွေထဲကိုဝင်ပြီး ကြော်ငြာခြင်း၊ Promotion တွေပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Personal Account ထက်စာရင် Engagement လည်းသိသိသာသာကို ပိုရရှိလာနိုင်မယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ Facebook Group တွေမှာ Public လုပ်ထားတဲ့ Group ရှိသလို Closed
Group တွေလဲရှိပါတယ်၊ Group မျိုးစုံရှိပြီး မိမိ Product နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Group တွေမှာဝင်ပြီး Marketing ဆင်းတာတို့၊ ဝန်ထမ်းခေါ်တာတို့စသဖြင့်ပြုလုပ်ပါတယ်။ Page တွေ Group ထဲကိုဝင်လို့ရသွားတာဟာ Engagement တွေအရင်ကထက်ပိုမိုရရှိလာစေပါတယ်။ Page တွေအနေနဲ့ Group ထဲမဝင်ပဲအပြင်မှာပဲ Ads တွေ Run၊ Target တွေလုပ်နိုင်တာပဲလို့မေးခွန်းလေးတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် တစ်ချို့ Group တွေဟာ ဝါသနာတူတဲ့လူတွေ၊ အကြိုက်တူတဲ့လူတွေ ချည်းပဲစုထားတဲ့ Group တွေရှိပါတယ်။ မိမိ Product နဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို စိတ်ဝင်စားကြိုက်နှစ်သက် သူတွေစုထားတဲ့ Group မှာသာကြော်ငြာတာဖြစ်ဖြစ်၊ Promotion လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အပြင်ကထက် ပိုမိုစစ်မှန်တဲ့ Engagement ကိုရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Page မှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ Audience နဲ့ Community ကိုတည်ဆောက်နိုင်အုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Group တွေဆိုတာလည်း Facebook ရဲ့ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲကဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဒီ Update လေးကို Facebook စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နဲ့ Audience Community ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်နေတာလို့လဲ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ Social Media Marketer တွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် Update လေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Update လေးအမှန်တကယ်ထွက်လာမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ref – google, socialmediatoday
Posted by Min Thuta/ စက်တင်ဘာ 21, 2018/ Blog/0Comment
Web Optimize လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ?
မိတ်ဆွေတို့အတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် e-reader App များ
2021 အကောင်းဆုံး Screenshot Extension (၃) ခု
Email Marketing ဟာဆက်လက် အသုံးများနေဆဲပါ
2021 မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Social Media Statistics များ